Movistar kpochapụrụ Spanish BQ na katalọgụ azụmahịa ya | Akụkọ akụrụngwa
Anyị kwesịrị ijide n'aka, n'agbanyeghị ịbụ ngwaahịa mba, mgbe anyị na-ekwu na BQ anọwo na doldrums n'oge na-adịbeghị anya. Imirikiti ngwaọrụ gị na-enwe akwa ịta mmiri na akwa oge na ngwanrọ ngwanrọ na-aga n'ihu. O yiri ka nke a bụ otu n’ime isi ihe kpatara ya Movistar kpebiri iwepu ngwaahịa BQ na katalọgụ azụmaahịa ya. Asọmpi a bụ ihe ọjọọ n'ọhịa nke etiti na ngwụcha ngwụcha, n'aka nke ọzọ, ụdị dịka Huawei, DooGee ma ọ bụ Motorola na-enyekwa ngwaọrụ tozuru oke (ma ọ bụ karịa) na ọnụ ala.
Dijitalụ ajụ Anyị maara ekwuputala ozi a nke Movistar kwadoro. Maka ugbu a, ha ga - enwe ngwaahịa dị na ụlọ ahịa mkpọsa Movistar. N'aka nke ya Ha achọpụtawo ọnọdụ a site na ndị otu nkwukọrịta BQ. Akọwapụtaghị ihe kpatara kpatara ọnọdụ a, agbanyeghị, na-agwa ndị ọrụ na ụlọ ahịa Movistar okwu, ọ dị ka ihe a na-ahụkarị iziga ngwaọrụ BQ na ọrụ ọrụ aka. Agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe ndị ọzọ, dị ka nkwekọrịta ndị na-ere ahịa ma ọ bụ oke oke uru, ahịa ahụ bụ eze.
Ka ọ dị ugbu a, BQ dị na katalọgụ nke ụlọ ọrụ ekwentị ndị ọzọ kachasị nọ na Spen. Kemgbe afọ gara aga BQ nọ na obere awa, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ihi ọnwụ nke oke ahịa ahịa, na abamuru nke ụdị ndị China ndị ọzọ na-enye ọnụahịa ndị ọzọ ruru eru na SAT nke na-adịghị anya na nke BQ na-enye. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-anọgide na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị isi na Spanish na-ahụ maka ekwentị, na-aenta ntị na ngagharị ọ bụla n'ahịa nke nwere ike ịkwalite mmelite ma ọ bụ mebie atụmanya ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Movistar kpochapụrụ Spanish BQ na katalọgụ azụmahịa ya
Nnọọ! na mba ka ha di? ha ga-enwe ozi ịkpọtụrụ?
Zaghachi Adri Ayala
BQ nọ na-eti mkpu maka ya
Ọnwa ole na ole gara aga, azụrụ m ọkọlọtọ ha, aquaris M5.5 3GB 32GB, na mgbe ọnwa abụọ mmetụ ahụ malitere ịda, rue mgbe ọ ghọrọ onye nzuzu na n'ikpeazụ ụgbọ mmiri ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ kpamkpam.
Na-egwu ala miri emi, achọpụtara m na e nwere ọtụtụ narị ikpe na BQ forum na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Ezigara m ya na ọrụ ọrụ aka, ma ha gọnahụ m nrụzi na-ekwu na akụrụngwa ahụ abanyela na iru mmiri ma kpuchie akwụkwọ ikike ahụ.
ee, ha nyere m ezigbo ego 15% ma ọ bụrụ na azụrụ m bq ọzọ ... ị bụ decoña, nri?
Ọgwụgwụ ... dị ka ị na-agwa n'isiokwu gị. Obi ụtọ na Huawei ọhụrụ m, mana site na ihe mgbu nke ịtụba € 300 na ahịhịa.
Ọ D TO M KA M DAC M ezigbo. Otu ekwentị, ma ọ bụ obere oge na otu onyinye dị ebube.
Telefonica anaghị anọchite anya ihe ọ bụla maka ụlọ ọrụ bq ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe fọdụrụnụ, mana n'ụzọ dị ịtụnanya mkpọsa mgbasa ozi a na-adịghị mma maka ika a sitere n'aka mgbasa ozi nke Mediatek tinyere paston na anyị niile maara na bq nzọ na Qualcomm n'ihi nsogbu ya na-akpata Mediatek very .. nnọọ kemmasi niile ukem ini?
Enwere m edison ma na-egbu egbu, ọ na-ewe otu ụbọchị iji jikọọ WiFi na nwayọ nwayọ, ọrụ aka ọrụ 'PON IP FIXED' na ihe niile ka dị otu, n'ikpeazụ azụrụ m akara ọzọ.
William okpu okpu agha dijo
Olee otú ọtụtụ sensationalism ...
Zaghachi Guillermo Casco Roto
Eziokwu bu na amasighi m BQ ika a, ha di ka ekwe ekwe.
bq mgbe ozo ikpeazu m bq aha ojoo e6 ga-emere m ebere maka ndi oru ma enwere m olile anya na ha ga-emechi n’oge n’adighi anya
Zaghachi na paco jones
Batman, ọ bụ ihe na-atọ ọchị ịtụgharị uche maka bq ndị isi scammers na Spain na Latin America, n'elu, bqs kachasị mma !!!
Meditek anaghị akwụ m ụgwọ ma azụrụ m aquaris e5 fhd ma eju m afọ na ngwaọrụ ahụ nke mere na mgbe ngebichi mebiri, enwere m obi ụtọ. Ọ na-ekpo oke ọkụ. Ihuenyo mgbe niile na mkpịsị aka. Ndaba na lag. Ka anyi ichikota a bit. Na-ahụ onye ọrụ maka ndị na-eche na n'ihi na ha si ebe a, a na-eme ihe niile.
Enwere m Bq E5 maka ọnwa 18, Bq m na-agakwa na fim.
Echere m na ọtụtụ ndị ahịa BQ chọrọ ịzụta mobile dị n'etiti, na-enwe olileanya na ọ ga-abụ otu ihe ahụ dị ka iPhone ma ọ bụ Samsung Galaxy 7.
Azụtala m BQ maka ịbụ onye na - ahụ maka ngwa ngwa Spain.
Site n'ụzọ, Movistar bụ ojoro.
Na Meditek nwere ike ịga jide Margaritas na mba ahụ.
Zaghachi JOSE Greedo
Ee ee, onye obula ma e wezuga BQ, movistar ojoo, bad mediatek, ndi ojoo ndi n’eme ihe ndi n’eme ka okpukpu abuo ha bq x5 di nma, ndi n’enye ha ihe ncheta Ram nke hapuru ha n’enweghi 2gb ram sockets tupu ha ewepu fhd….
Otutu ihu abuo ma kwere na otu uwa.
[APK] Budata ma nwalee ihe ọhụụ Pixel ọhụrụ ugbu a, ma ọ bụ ihe bụ Nexus Launcher